भर्चुअल कक्षाको आवश्यकता
[June 01, 2020 07:06:20 AM]
भीम श्रेष्ठ - कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणले विश्व यतिखेर आक्रान्त भएको छ । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर हरेक क्षेत्रमा परेको छ । कोरोना असरले आक्रान्त क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि एक हो । कोरोनाको प्रभावका कारण नेपालमा शैक्षिक शत्र २०७६ को बार्षिक नतिजासमेत प्रकाशन हुन पाएको छैन भने नयाँ शैक्षिक शत्र २०७७ को शुरुवाती महिना बैशाखको आधा महिना बितिसक्दा पनि नयाँ शैक्षिक शत्रको शुरुवात्का बारेमा कुनै कार्य अघि बढेको छैन । शैक्षिक सत्रको शुरुसँगै विद्यालयहरुले उत्सवको रुपमा यतिवेला विद्यार्थी भर्ना अभियान मनाईरहेका हुन्थे त विद्यार्थीहरु नयाँ जोस जाँगरको साथ नयाँ कक्षामा अध्ययन गर्न पुगिसकेका हुन्थे ।
वर्तमान परिप्रेक्षमा त्यो सबै उल्टो भइदिएको छ । नत विद्यालयमा शिक्षक पुग्न सकेकाछन् नत विद्यार्थी सम्पूर्ण विद्यार्थी र शिक्षकहरु कोरोना भाइरसको सन्त्रासले आ आफ्नो घरमा लकडाउनको अवस्थामाछन् । अझै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु कहिले खुल्ने भन्ने यकिन भएको छैन । विद्यालयहरुले कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको मात्रै हैन चैत्र महिनामा नै सञ्चालन हुनु पर्ने एस.इ.इ. परीक्षा कहिले हुने भने निश्चित हुन सकेको छैन । कतिपय विद्यालयहरुले सामाजिक संजालको प्रयोग गरी विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र २०७६ सालका नतिजा प्रकाशन गरेतापनि विद्यालयामा विद्यार्थी वोलाएर कक्षा संचालन गर्न सम्भव देखिएको छैन । यस विषम परिस्थितीमा अहिले नेपालमा भर्चुअल कक्षाको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने कक्षा नै वास्तवान भर्चुअल कक्षा हो । यस अन्तर्गत रेडियो, टि.भी. ईन्टरनेटको माध्यमवाट सञ्चालन गरिने कक्षा हो । विश्व परिवेशलाई नियाल्दा भर्चुअल कक्षाको अभ्यास धेरै अगाडीदेखि भएको पाइन्छ । नेपालमा भने २०७२ सालको भुकम्प पश्चात भुकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी एन.टि.भी. वाट भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरियो भने त्यस पछि पनि केहीमात्रामा सञ्चालन गरिँदै आयो यस प्रति नत शिक्षकले चाख दिए नत विद्यार्थीले । तर अहिलेको परिस्थितीमा यसको आवश्यकता टड्कारो रुपमा खड्किदै गएको छ । तर आश्यकता परेपछि मात्र खोजी गर्ने हाम्रो बानीले गर्दा आज हामी शिक्षकहरु र विद्यार्थीहरु कुहिरोमा अलमलिएको काग जस्तै भएकाछौ । केही क्याम्पस, सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकाछन् ।
यो भर्चुअल कक्षा सम्बन्धी जानकारी केही शिक्षकमा मात्र रहेको छ । यस विषम परिस्थितीमा भर्चुअल कक्षा सम्वन्धि तालिम सञ्चालन गर्न पनि कठिन छ । नेपालमा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासको लागि तालिम सञ्चालन गरिन्छ । तर त्यहाँ भर्चुअल कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी तालिमको प्याकेज राखिएन मात्र अन्य पक्षमा जोड दिइयो । यदि बेलैमा सम्पूर्ण शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरी तयारी अवस्थामा राखेर अन्य आवश्यक पूर्वधार पनि तयार पारेको भए अहिले यत्रो कोलाहल नै हुने थिएन ।
यस विषम परिस्थितीमा भूपति बस्यालको अध्यक्षतमा गठन भएको प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज, नेपालले यस लकडाउनको सदुपयोग गर्दै अहिले देशभरीका प्रविधिमा रुचि राख्ने शिक्षकहरुको लागि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ जुन अति सह्रानीय कार्य हो । यस्तै कार्य सरकारी तवरवाट पनि बेलैमा हुनुपथ्र्यो । योजनाबद्ध रुपमा भर्चुअल कक्षाको तयारीलाई ब्यापक बनाउँदै आउँदा दिनहरुमा विद्यालयहरुले विदाको समयमा पनि यस्ता भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । - लेखक ज्योति मा.वि. इटहरी ५, सुनसरीका शिक्षक हुन् ।